Tamboo: Booranni tamboo maaf barbaada? - BBC News Afaan Oromoo
Tamboo: Booranni tamboo maaf barbaada?
1 Waxabajjii 2018
Goodayyaa suuraa Tamboo cicirani, goggosani, tumani gurguran
Kamisa darbee guyyaa farra tamboo addunyaati. Tamboon haala badaa akkasumas fhawaasa biraa biratti ammoo haala gariitti laalama. Fakkeenyaaf, gara Booranaatti tamboofi buni ulfina guddaa qaba. Qaama aadaafi duudhaa oromoo Boranaatti osoo jennee ni dandee'ama.
Akka aadaa Booranaatti tamboon ni nyaatama. Hin aarfamu. Tamboon tun aadaa Booranaa keessaatti "Daraaraa" jedhamuun beekamte. Tamboo kunis Boorana keessatti gosa lamaatti beekama.
1. Tamboo Borondaadi (kan alanfatan)
2. Tamboo qilleensoo (kan aarsan)
Akka jaarsii argaa dhageetti Doktar Borbor Bulee Dirree jedhuutti, gaafa durii tamboon hin nyaatan. Kan nyaatulleen nama tokoo lamaa. Booda keessa akkuma barii deemuun nami nyaatu bayyataa deema. Amma dhalataan hedduun hin nyaata.
Tamboo tana aadaa keessatti daraaraa jechuun namni hundi akkanaan kabaja kennanifi. "Wanni daraaraa jedhaniif ulfinaaaf. Muki bahu cufti daraaraa qaba. Kanaafi tamboodhaanis maqa kabaja itti tolchanii daraaraa jedhaniin," jedha Aab Borbor Bulee.
Yoo waa kadhachuu deemani, daraaraa jedhanii tamboo tana qabatanii geessu. Fakkeenyaaf, durii gaafa daraaraan kun hi jirre marga jiidhaa muranii wa'iin kadhatan. Dubra yoo kadhaa deeman osoo uffataafi loon hingeesiin dura daraaraa geessan. Amaalle aadaa Boorana keessatti daraaraa hindidan. Yoo sii fidan osoo intalli tee kennuullie hinfeene tamboo fudhu qabda, aadaadhaan hin didamu.
Daraaraa yoo sii fidan olaa cufaaf qoodaan; fakkeenya yoo kadhaa. Uffata firaa qofaaf qofaatti kennama daraaraa garuu nama cufatu argata.
'Hoodhaa daraaraa' jedhame keenama, 'namaa saa'an daraari' jedhamee irra fudhatam.
Booranni durii bunaafi tamboo manaa hin dhabuu jedhan. "Yoo keessummaan namatti dhuftu buna qalaniif. Yoo kan tambo nyaatu ta'e ammoo tambootu dhyaataaf," jedhu Dhiibaa Guyyoo.
Akka Dhibaa Guyyoo jedhuutti, duri tamboo tana hin aarsan. Namni gariin yoo qofaan ykn uttaalloon qabutti funyaaniin fufatu ture. Kunis tamboo waraqaatti maruunii aarsite xuuxe, aara funaaniin yaafti.
Kana qofaa miti aadaa Oromoo Booranaa keessatti tamboo ykn daraaraan dhimmoota asiin gadhii irratti ni barbaachisa.
1. Yoo ilmi dhalatee daraaraa kennama
2. Fuudhaafi heeerumaati daraaraa kennamti
3. Gubbisaaf moggaatii daraaraa kennamti
4. Dubraa jaa'iilaaf kadhaa deema daraaraa
5. Meedhichaafi haanunaati daraaraa kennama
6. Nyaachisaa gadaa keessatti illeen daraaraa kennama
7. Yoo Jilli gadaamoojjiifi yoo baallii illeen daraaraan ni kennama
8. Walmufatanii araaraaf wal bira yoo dhaqan daraaraa dheettaa geessa. Kana jechuunis yoo dhiifama kadhachuu deemuu borani, darara qabate nama itti dhiifam gaafatu sanaaf geessa.
9. Akka qorsaa maddaa yaaluufi horiin yoo dhukkubsate illeen tamboo buusan- Horii fayya dhabee tamboo buusanii jedhan. Isaan booda haxifate wayyaa'aa. Yoo horiin madaa qabaatees, tamboo alalchanii madaa sana irratti tufan. Kunis egaa akka tisiisni irra hinbuune, isaan boodas faalama biiraaf akka hin saaxilamne dhorka, ni fayyisas.
Walumatti tamboon jilaafi aadaa Booranaa cufaa keessaa jirti, jedhaniiru Dhibaa Guyyoo.
Tambo gaafa durii ,hin nyaatan, ka nyaatuleeni nama tokoo lamaa , ammo akuma barii deemuun nami nyaatu bayyata deema, amma dhalataan heddun hin nyaata.
Dr. Borbor Bulle, Jaarsa argaa dhageetti
Booranni tamboo maafi nyaataa?
* Araadaaf, Ceekoo ykn kophummaa yoo itti dhagahamu, yaaddoo akka akkaa itti obsuuf akkasumas yeroon gabaabsachuuf.
* Coqoof ykn boonsaaf- Booranni aadaa isaa keessaatti guddoo coqata. Tamboon yoo nyaatan hancufa diimtuu qabdi. Abbaan liibee huwwoolee bira taaye tamboo yoo cirriifatuu akka coqoo guddootti herrega.
Tamboon tun keemikaala hamaa qabdi. Booranni ammoo mala ofii isaa ka ittiin keemikaala sun diqqeessuu qaba.
"Innis magaadoo itti kureeffachun. Magaadoon gosa Soogdaatti, garuu soogdaa miti. Biyyee adii fakkaatti, kurooftu ykn dhangagaa'aa. Maanya qabeessaan soogdaa Gaalaa fi re'eeti. Waan horiin kun baala mukaa guddoo nyaatuuf," jedh Barsiisan yunivarsiitii Dilla Jaatanii Bonayyaa Godaanaa.
Booranni yoo tambootti magaadoo kureeffatu, keemikaala ykn irree tamboo indiqqeessitii jedha.
Eegii bara durii sun tamboo nyaatanii araadaa itti taate. Tanaafuu yoo jilaa, yoo kadhaa dubraa, yoo ilmi dhalatuu fi yoo yaa'ii godaanu, nama cufaafaaf ni kennu daraaraa kana. Nami cufti daraaraa fudhatee araada bahee gammadee gala. Tanaaf "hoo daraaraa'' yoo jedhan kennana, ''daraarii daraarii'' jedhanii fudhatan," jedhu Bonayyaa Godaanaa.